Djibouti Francolin waa jilicsanaan iyo jahwareer ah oo loo yaqaan ‘gamemird gamemird’ oo loo yaqaan ‘Critically Endangered’ oo kaliya oo laga og yahay laba shimbir oo muhiim ah oo shimbir ah (Forêt du Day iyo Mabla) oo ku yaal Jabuuti, taas oo ah mid aad u kala jaban oo hoos u dhacaya heerkulka iyo tayada, iyo dadweynaha ayaa hoos u dhac ku yimid. Tani waxay ka dhigan tahay, haddii aan waxba laga qaban, noocyada ayaa wajahaya khatarta aadka u sareysa ee mustaqbalka dhow (50% fursada toban sano / saddex jiil).
Arrimaha muhimka ah ee noloshooda waxay u muuqdaan inay sii xumaanayaan hoygooda dabiiciga ah, sida caddaynaysa dhimashada sare ee geedaha waaweyn ee meesha uu ku dhaco. Sababaha ah in dabeecadda dabiiciga ah ay ka sii darayso si fiican looma fahmin, hase yeeshee, waxaa la soo jeediyey in la soo jeediyo tobankii sano ee la soo dhaafay.
Kuwani guud ahaan waxay ka kooban yihiin isku-dhafan isku-dhafan oo ay ka mid yihiin: soo-saaridda geedaha ee dhismaha iyo xaabada; daaq aad u badan; iyo / ama isbedel muuqda oo ku saabsan cimilada xaaladaha kulul iyo xannibaadaha taas oo saameyn ku yeelatay wax soo saarka nidaamka deegaanka.